ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတွေ သတိမပြုမိတတ်တဲ့ အချက် (၇) ချက် ~ Myanmar Online News
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတွေ သတိမပြုမိတတ်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
1:21 AM ရသ No comments
ယောင်္ကျားအများစုဟာ ကိုယ့်ရည်းစား၊ ကိုယ့်ချစ်သူ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ ရစ်တတ်ကြတယ်၊ ဘာက ဘယ်လို အပြစ်ရှာတတ်ကြပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ရည်းစား ဒီနေ့ဘာတွေ လုပ်ထားတယ်၊ ဘာတွေလုပ်မထားဘူးဆိုတာမျိုးကိုတောင် သတိမပြုမိတတ်ကြပါဘူး။
မချစ်လို့ ဒီလို သတိမပြုမိတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် အာရုံဘယ်လောက်ထားထားလဲ၊ ဘယ်လောက်အသေးစိတ်သလဲဆိုတာမျိုးဟာ အမျိုးသမီးတွေ တကယ်လိုချင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားတွေ သတိမပြုမိတတ်တဲ့ အရာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော်။
၁။ ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံအိတ် အပြောင်းအလဲ လုပ်ထားတာမျိုး။
ကိုယ်က တစ်သက်လုံးမှာမှ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်အိတ်ပဲ စွဲကိုင်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ထားပါတော့လေ။ ပိုက်ဆံအိတ်ကို မကြာခဏ ပြောင်းကိုင်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သူတို့ဒါကို သတိမပြုမိတာ သေချာပါတယ်။
၂။ကိုယ့်ချစ်သူက ခြေသလုံးမွှေး ရိတ်ထားလား၊ မရိတ်ထားဘူးလား ဆိုတာမျိုး။
ကိုယ်က ခြေသလုံးမွှေးရိတ်တတ်သူလား၊ ရိတ်လေ့ ရိတ်ထ မရှိသူလားဆိုတာတောင် သူတို့သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
၃။အဲ့ဒီညက သူမ မိတ်ကပ်လိမ်းထားလား၊ မလိမ်းထားခဲ့ဘူးလား ဆိုတာမျိုး။
ဟိုညက သူနဲ့အပြင်သွားတုန်း ကိုယ်မိတ်ကပ်လိမ်းထားလား၊ မလိမ်းထားဘူးလားဆိုတာမျိုး သူတို့အတွေးထဲမှာ သိပ်မရှိတတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က လိမ်းမထားခဲ့ရင်တောင် လိမ်းထားတယ်မလားလို့ အတင်းဇွတ်ပြန်ငြင်းတတ်တာမျိုးပါ။
၄။ကိုယ့်ကောင်မလေး ဖိနပ်သစ်ပြောင်းစီးထားသလား ဆိုတာမျိုး။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က ဖိနပ်အသစ်လေးနဲ့မို့ ချစ်သူမေးတာမျိုး ခံချင်တယ်။ သူတို့က ဒါကို သတိမပြုမိဘူး။ အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုး အတွဲတွေတိုင်း ရင်ဆိုင်ဖူးမှာပါ။ မိန်းကလေး သဘာဝ ဖိနပ်သစ်လေးနဲ့ လှလိုက်တာလို့ အပြောခံချင်ရင်တောင် သူတို့ကို အရင်အသိပေးရမယ့် အခြေအနေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
၅။သူမ အရင်ထက်ပိန်သွားသလား၊ ၀လာသလား ဆိုတာမျိုး။
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန် ကိုယ်ပိန်သွားသလား၊ ၀လာသလားဆိုတာမျိုး မေးလိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ အဖြေက တွေ့နေကျမို့လို့ သတိမထားမိဘူး ဆိုတာချည်းပဲ လာပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တော့ ဒါကို သူတို့ သတိမပြုမိကြတာပါ။
၆။ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းနီရောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ထားသလား ဆိုတာမျိုး။
ကိုယ်က နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတတ်သူဆိုရင်တော့ ချစ်သူက ကိုယ်ဘယ်အရောင်တွေ ဆိုးတတ်သလဲဆိုတာ သိကို သိထားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချွင်းချက်အနေနဲ့ ကိုယ်နှုတ်ခမ်းနီရောင် ပြောင်းဆိုးလာတာကို သတိထးမိတဲ့ ချစ်သူဆိုရင်တော့ အမှတ်ပိုပေးလိုက်တော့နော်။ တွေ့ရခဲလို့ပါ။
၇။သူမ ဘောင်းဘီအသစ် ၀တ်ထားသလားဆိုတာမျိုး။
ဂျင်းဘောင်းဘီဆိုတာမျိုးက တစ်ထည်နဲ့တစ်ထည် ဆင်တူနေတတ်ပေမယ့် ဘောင်းဘီအသစ် ၀တ်ထားတာကို သိနေတဲ့သူမျိုး ဆိုရင်တော့ သူဟာ သင့်အပေါ် တော်တော်လေး ဂရုစိုက်တဲ့ ယောင်္ကျားပါပဲ။
လိုက်ဖက်တဲ့ လက်သည်းနီအရောင် အတွဲအစပ်
ရွှေစင်ရဲ့ Fashion အလန်းလေးများ....
Stretch Marks အကြောပြတ်ခြင်း
ရိုးရှင်း အထာကျပြီး နွေရာသီနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Cap ဦး...
ဆရာဝန်မော်ဒယ် Aye Chan Moe Fashion
သမ္ဗုဒ္ဓေ မကြောက်သော သရဲ
အရှုံးသမားကို ဒီမိုကရေစီက အာမခံတယ်
`` မိန်းကလေးများ သိမှတ်ဖွယ်ရာ ´´
သောမတ်အိုဟေးကင်တားနားနှင့် မဇ္ဈိမ အသေးစိတ် တွေ့ဆုံေ...
Tomboy (ယောက်ျားလျာ) စိတ် ကိန်းအောင်းနေတဲ့ နာမည်ကြ...
၈၈ အာဏာသိမ်း၊ ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး စစ်တန်းလျားပြန်...
MTV အသစ် Partition မှာလိင်အသားပေး သရုပ်ဆောင်မှုတွေထ...
ဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးတွေကို ကောင်မလေးတွေ ကြွေကြသလဲ
ခံစားမှုပိုကောင်းစေမယ့် ၂၁ရာစု လျှပ်စစ်သုံး ကွန်ဒုံး
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတွေ သတိမပြုမိတ...
Ei Chaw Po Fashion
အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ
ရွှေမဟုတ်တဲ့ အမိုက်စား ရွှေရောင်ဆွဲကြိုးဒီဇိုင်းသစ်များ
စားကျက်ကို လယ်သမား မပိုင်၊ ကျွဲနွားတွေသာပိုင်
အမျိုးသားတွေရဲ့ ညနတ်သမီး ယုံတမ်းစကားများ
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ထောက်ကြံ့မှာ ဆန္ဒပြ
ပုရိသတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး အမျိုးသမီးအနုပညာရှင...
Iris Zin Mar Myint Fashion
Cervical Spondylosis လည်ပင်း ကျီးပေါင်းတက်နေလို့
******* ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်၊သိုက်စောင့်ဟူသည် ********
Energy Drinks တွေကို ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်...
၁၉၄၇ နှင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်တူ အရိပ်ဆိုး ဒေါ်အော...
ယုသန္တာတင် - Yu Thandar Tin Fashion
မိုင်တိုင်(၂၁) . . . . . . .
အံ့သြဖွယ် လွယ်ကူလှတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ...
နွေရာသီ ကြက်သား၊ ပင်စိမ်း ဟင်းချို
ဖေ့ဖွတ်ခ် သုံးတဲ့ ခေတ်မှီတဲ့ သရဲရှိသလား (ဇာတ်သိမ်း)
ရွံ့ မြောင်းထဲပြုတ်ကျပြီး နစ်နေတဲ့ ဆင်ပေါက်ကလေးကို...
ဖေ့ဖွတ်ခ် သုံးတဲ့ ခေတ်မှီတဲ့ သရဲရှိသလား (အပိုင်း-၁)
*******ရွှေစာရံ ဘုရားမှ ထူးထူးခြားခြား ကလေးသိုက် **...
သပ်ရပ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးကို ပိုင်ဆ...
မြန်မာ့နှလုံးသားနေရာသို့ လာချင်အောင် အလည်ခေါ်နိုင်ရေး
သေခြင်းနှင့် ယှဉ်၇်ျ လောင်းသည်။( ဇတ်သိမ်းပိုင်း )
သေခြင်းနှင့် ယှဉ်လောင်းသည်။(ပထမပိုင်း )
" သွဲ့ "
နွေရာသီအတွက် အလှအပလျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက်
ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ ချစ်စရာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအလန်းလေ...
ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း တွေ့ ရှိရ၍ စစ်မြေပြင်ကနေ ဗြိတ...
" သတိ! ကလေးအသား ခါးသည်။ ခွေးအသားချိုသည်။ "
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင...
ရာသီအပြောင်းအလဲမှာ အဖြူရောင်ဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆံ...
အသည်းပုံ လက်သည်းဒီဇိုင်း ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ကြည့်မလား
ဘ၀ခြားမှ ချစ်သူ ...
တစ်ယောက်တည်း selfie ရိုက်တဲ့အခါ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကြည့်...
အင်္ဂလန် တခွင် ဗြောင်းဆန်အောင် လေပြင်းတိုက်၊ ရေကြီး
Wint Yamone Hlaing ရဲ့ဖက်ရှင်အလန်းမျာ....
ပြည်ထောင်စု ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပဋိသန္ဓေနှစ် ...
စိုင်းစိုင်းနဲ့ မေဂရေ့စ်ရဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းများ
ချင်းရိုင်မြို့က ကွမ်ရင် မယ်တော် ဘုရားကျောင်း
ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ သင်ရော သင့်ချစ်သူပါ သဘောက...
ပိတ်ရက်တွေကို ဘ၀အတွက်အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ